The headets ciyaaraha ugu fiican ee dhammaan qiimaha iyo dhufto ee | War gadget
Ku ciyaarista ciyaaraha fiidiyowgu maahan wax hiwaayad ah oo fudud in la noqdo waayo-aragnimo dhab ah oo loogu talagalay dareemayaashayada, oo si gaar ah loogu xuso muuqaalka iyo codka. Waqti kasta oo aan ku raaxeysanno muuqaallo wanaagsan laakiin sidoo kale saameyn dhawaaqeed ka wanaagsan. Saamaynta dhawaqyadan ayaa gabi ahaanba la ogaan doonin haddii aanaan haysan ilo cod oo tayo leh, ilaa kuwa ku hadla telefishannada badanaa waa kuwa dhexdhexaad ah. Kormeerayaasha xitaa way ka sii xun yihiin iyaga oo leh boos yar.
Si aad kali u ciyaarto laakiin sidoo kale inaad la ciyaarto asxaabta, kuwa ugu badan ee lagula taliyay ayaa ah sameecadaha dhagaha. Haa, waxay noqon kartaa madaxa lagu xidho makarafoon ku dhex jira. Sidan ayaan ku awoodnaa ku dhagayso codka ciyaarta fiidiyowga oo la kansalida buuqa aamusnaanta ah oo aan awoodi karno inaad la xiriirto saaxiibbadeen. Waxaa jira kuwo ka mid ah dhammaan qiimaha iyo naqshadaha, oo loo heli karo barxad kasta, laakiin waxaa jira kuwa u heellan gaar ahaan barxad, oo siinaya waxqabadyo ama isle'eg gaar ah. Qodobkaan waxaan ku arki doonaa waxa aniga aniga ah kuwa loogu talinayo suuqa hadda jira. Adkeynaya tayada, qiimaha iyo madal.
1 In ka yar € 50
1.1 Ku kalsoonow GXT 4376
1.3 Tronmart Sono
1.4 Mars Ciyaaraha MH020
2 Laga soo bilaabo € 50 ilaa € 100
2.1 Sony - Dhegaha Bilaa Gold
In ka yar € 50
Halkan waxaan ka heli karnaa noocyo badan oo kala duwan Koofiyadaha oo leh qiime macquul ah oo macquul ah iyo in ka badan tayada la aqbali karo, xitaa marka laga hadlayo qaabka ugu raqiisan, waxay si weyn u wanaajin doonaan khibradeena iyadoon jeebka jeexjeexin wax badan.
Ku kalsoonow GXT 4376
GXT 4376 wuxuu soo bandhigayaa 50mm ku hadla awood badan oo leh 7.1 dhawaq wareegsan. Waxay keenaan sare sare iyo hoose, iyo sidoo kale baasiin qoto dheer, waayo-aragnimo heer sare ah. Waxay leeyihiin iftiin cad oo LED ah dhinacyada dhagaha dhagaha iyagoo bixiya naqshad soo jiidasho leh. Waxay ku daraan suufyo jilicsan oo raaxo leh kalfadhiyada ciyaaraha dheer. Intaa waxaa dheer, xargaha madaxa ayaa is-hagaajiya oo bixiya taam buuxa. Khasaaraha kaliya ee aan ka heli karaa waa taas kaliya xiriir USB sidaa darteed ma awoodi doonno inaan si toos ah ugu xirno iyaga koontaroolaha PS4 ama ku isticmaalno Smartphone ama Tablet.
Waxay la jaan qaadayaan labadaba PC sida PS4 iyo XboX. Qiimaheeda hadda waa € 39 In xiga isku xirka.
Mid ka mid ah headset-yada isboorti ee ugu isfahamka badan uguna raaxo badan qiimadan. Ku habboon kalfadhiyada ciyaaraha dheer ee leh cinwaannada tooska ah ee tooska ah. Suufka la hagaajin karo ayaa kaa fogaan doona wax kasta oo kaa mashquulin kara iyo makarafoonka la saari karo waxay u oggolaan doontaa bixitaankeeda iyadoo kuxiran inaad ubaahantahay iyo inkale. Waxay leedahay laydh LED ah oo la beddeli karo iyadoo la rogo garaaca koofiyadda.
La jaan qaada Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC iyo aaladaha mobilada ee Android iyo iOS. Qiimaheeda hada waa 42,99 € In xiga isku xirka.
Koofiyadaha qaarkood ee aadka loogu taliyay inay ku ciyaaraan cinwaano tartan sida Waxaa lagula talinayaa ciyaaraha sida Halo 5 Guardians, Metal Gear Solid, Call of Duty, Star Wars Battlefront, EA Sports UFC, Overwatch, World of Warcraft Legion, PUBG, League of Legends .... Waxay soo bandhigaan dhawaaq cad oo muraayad leh oo leh darawal sare oo 50mm magnet neodymium magnet ah. La saari karo, makarafoonka-baajinta cod-weynaha oo loo rogi karo kor xagga xagal 120-degree ah.
Waxay ku habboon tahay qalab kasta oo leh xiriir 3.5m Jack ah waana lagu qiimeeyaa 45,99 € In xiga isku xirka.
Mars Ciyaaraha MH020
Kuwa ugu jaban liiska illaa iyo hadda waa sameecadaha dhagaha ee Mars. Wiilka ergonomic oo leh makarafoon iyo xakamaynta marin u fududaanta leh xakamaynta mugga ee ku dhafan fiilada. Waxay leeyihiin dIadema faashad leh iyo suufyo leh teknolojiyad hawo ah oo lagu daboolay maqaar dabiici ah oo dusha sare ka daloolan oo neefsanaya. The Makarafoonka waa la laabi karaa wuxuuna u oggolaanayaa isgaarsiin dhakhso leh oo cad.
La jaan qaadi kara PS4, XboX, Mac, Nintendo biiro, kiniiniyada, taleefannada casriga ah iyo qiimaheeda hadda waa .9,99 XNUMX tan isku xirka.
Kuwa ugu caqliga yar xagga naqshadeynta laakiin leh wax ka badan qiimaha la isku hagaajiyay. Naqshadeynta militariga ayaa maamusha inay ka dhigto koofiyadaha aad jeceshahay haddii sheygaagu yahay ciyaaraha toogashada sida Call of Duty or Battlefield. Iyada oo iswaafajin caalami ah, makarafoonka dib looga noqon karo, Nalalka LED-ka, suufka suufka duuban, iyo madaxa la isku hagaajin karo ee kuu oggolaanaya inaad ku raaxeysatid quusitaanka wanaagsan ee ciyaarta fiidiyowga.
Waxay la jaan qaadayaan dhammaan dhufto ee sidaas darteed waa kuwo aad u badan oo qiimahoodu yahay .20,99 XNUMX tan isku xirka.
Laga soo bilaabo € 50 ilaa € 100
Haddii aan leenahay miisaaniyad ballaaran oo aan dooneyno inaan ka dhigno qibradeena dhageysiga mid dheeri ah marka aan tartameyno ama aan si fudud ugu raaxeysano cayaaraha fiidiyowga aan ugu jecel nahay wadar ahaan gunta, waxaan heysanaa dhageysiyadan dhegaha leh 7.1 jilitaanka codka ku xeeran taasi naga yeeli mayso oo keliya inaan ku raaxeysano dhawaaqa sida ugu buuxda, waxay sidoo kale naga caawin doontaa inaan ogaano jihada kasta oo tallaal ama cag soo socota ay ka imaaneyso.
Sony - Dhegaha Bilaa Gold
Shaki la'aan xulashada ugufiican haddii barnaamijkaaga ciyaaraha uu yahay midka caanka ah ee PlayStation 4. Waxay leeyihiin 7.1 cod, nolol batari dheer iyo astaamo maqal ah oo gaar ah oo loogu talagalay ciyaaraha. Iyagu waa sameecadaha dhagaha ee rasmiga ah ee loo yaqaan 'PS4', oo iyagu aad bay u wanaagsan yihiin. Soo saarkeedu waa heer sare naqshadduna way yar tahay. Markii lagu isticmaalo PS4 ama PS3, waxaad lahaan doontaa dhawaaqa hareeraha dalwaddii iyo ikhtiyaar aad ku buuxin lahayd goobaha codka ee caadiga ah. Hadaad soo dejiso barnaamijka 'Headset Companion' ee ka socda Dukaanka PlayStation, waxaad marin uheli doontaa astaamaha codka ciyaarta ee gaarka ah ama waxaad ku hagaajin kartaa codka dookhaaga. Qeybaha kale ee harsan, dhawaqa wuxuu noqon doonaa mid si heer sare ah u muuqda laakiin luminta qaabeynta, wuxuu qeexayaa waxaad siiso ciyaar kasta ama qaab kasta.
Waxay la jaan qaadayaan dhamaan meheradaha laakiin PS4 waxay yihiin ikhtiyaarka ugu fiican shaki la'aan haddii aad raadineysid isku dheelitirnaanta tayada iyo qiimaha, oo lagu heli karo qiimo dhan € 79,99 tan isku xirka.
Haddii aad raadineyso wax tayo sare leh oo dhexdhexaad ah. Xumbada Memory-du waxay iyaga ka dhigeysaa kuwo aad u raaxo leh haddii aad qorsheyneyso inaad yeeshaan kulanno dhaadheer oo ciyaaro ah. Tayada codka waa mid aad ugu wanaagsan xaddiga ay ku fadhido, waad ka bogan doontaa faahfaahin kasta. Makarafoonka aan tooska ahayn ee la hagaajiyay wuxuu yareeyaa buuqa jawiga si loo hagaajiyo tayada codka waana loo soo jiidan karaa si loo isticmaalo wakhti kasta. Koofiyad walba waxaa ka mid ah kontaroolada mugga iyo badhanka carrab la 'ee loogu talagalay hagaajinta duulimaadka. Taas oo ka dhigaysa iyaga dhagaha wax lagu dhegeysto oo aad u badan.
Waxay la jaan qaadayaan dhammaan aaladaha waxayna leeyihiin qiimo dhan .59,90 XNUMX isku xirka.
Qalabka dhegaha oo aad u sarreeya oo lagu soo bandhigo 40mm darawallo maqal ah. Waad ku mahadsan tahay makarafoonkeeda la saari karo waxaad ku raaxeysan doontaa quusin dhexdooda ah adiga oo aan mashquulin haddii aad keligaa ciyaareyso. Waxaa loo dhisay raaxaysi iyo cimri dherer leh qaab aluminium khafiif ah iyo barkimooyin dhegta maqaar dardaro dardaro oo lagu daray. Waxay leeyihiin tayo sare iyo amniga lahaanshaha qalab sumcad gaar ah ku leh gudaha warshadaha. Iyada oo cajiib ah Dhawaqa 7.1 Virtual ee kuu oggolaanaya inaad cabirto sameecadaha dhagaha si aad u keento khibrad dhawaaq hareeraysan oo shaqsiyeed.
La jaan qaada dhammaan barnaamijyada ay ka midka yihiin kombuyuutarrada, kombiyuutarada ama qalabka mobilada, qiimaheedu waa .59,99 XNUMX tan isku xirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Headphones Ciyaaraha ugu fiican ee dhammaan qiimaha iyo dhufto ee